नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अराजकताका अगाडि नियम कानुन फेल हुनु भनेको त्यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन !
अराजकताका अगाडि नियम कानुन फेल हुनु भनेको त्यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन !
जब जब स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका नाममा अराजकता फैलिँदै जान्छ, हातपात, लुटपाट, चोरी, डकैती, हत्या, अराजकता, तोडफोड, आगजनी बढ्दै जान्छ त्यस पछि नियम, कानुन, सिस्टम फेल हुँदै जान्छ । जनधनको ठुलो क्षती पनि हुन्छ । अराजकताका अगाडि नियम कानुन फेल हुनु भनेको त्यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन । जब रुलले होइन हुलले निर्णय गर्न थाल्दछ, सडकबाट र अराजकताका बिचबाट निर्णय हुन थाल्दछ, राजनीतिक घेराका आधारमा निर्णय हुन थाल्दछ, त्यहाँ सबै कुरा फेल हुन्छ । अमेरिकामा यदि यस्तै ताल हो भने घटना घटे तपाईँ हामीले 911 कल गर्दा गुहार नपाइने दिन पनि आउन सक्छ । दोषी प्रहरीलाई कानुन अनुसार कडा कारबाही
होस । जर्ज फ्लोयडले जस्तो कुनै प्रहरीको घुँडाले थिचिएर, अन्यायमा परेर अश्वेत मान्छेहरूले मात्र होइन कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् । यो ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर मात्र होइन सबै मानिसको लाइभ्स म्याटर पनि हो । न्याय मागौँ, न्यायका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गरौं, साथ दिउँ तर यस्तो समबेदनशील कुरामा राजनीति गरेर अहिले अमेरिकामा प्रहरी सँख्या घटाउने, प्रहरीको बजेट काट्ने, प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने, प्रहरीले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने जुन काम अहिले भइरहेको छ यसले अराजकता र असुरक्षालाई झन् बढावा दिने हुनाले यस्ता काममा नलागौँ । सबै प्रहरी दोषी छैनन् है ख्याल गरौँ ! प्रहरी जनताकै सुरक्षाका लागि हो । प्रहरी फेल भयो भने ल एन्ड अर्डर कसले कायम गर्ने त ?? बोल्नु, लेख्नु अगाडि, सडकमा हानिनु अगाडि गम्भीर पनि बनौँ ।